Global Voices teny Malagasy » Vonomoka Tao Rabaa , Le Caire : Telo Taona Izay No Lasa, Mbola Miraikitra Ny Fofon’ny Fahafatesana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Septambra 2016 4:20 GMT 1	 · Mpanoratra Salma Essam Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Tsy mbola nanatri-maso velively ny fihenjanana mahatezitry ny rivotra ara-politika sy ny hetsi-panoherana tarihan'ny mpianatra aho, tahaka ilay iray izay voafehy taorian'ny fanaparitahana ny fitorevahana tao Rabaa el Adaweya,  antsoina ankehitriny hoe Vonomoka tao Rabaa . Hitako ireo bala tena izy nitifirana ny vavahady fidirana, ireo fiara mpamonjy voina tao amin'ny Oniversite, ary ny habetsahan'ny entona mandatsa-dranomaso natifitra ireo mpanao diabe izay nanameloka ny fandatsahan-drà nataon'ireo mpitandro filaminana ejipsiana tao amin'ny kianjan'ny Rabaa el Adaweya.
Nambara nanerana an'i Ejipta, ny maraimben'ny 14 Aogositra 2013, ny fampiharana ny lalànan'ny tany misy hotakotaka satria noravan'ny mpitandro filaminana tamin-kerisetra ireo fitorevahana nokarakarain'ny Firahalahian'ny Silamo, mpanohana manohitra ny fanonganana an'i Mohamed Morsi, filoha ejipsiana voalohany voafidy tamin-kalalahana sady mpiasam-panjakana ambony taloha tao amin'ny Firahalahian'ny Silamo. Fampiasàn-kery nahafatesana olona 1.000  tao anatin'ny andro iray. Ny fitorevahana tao amin'ny kianjan'ny Rabaa el Adaweya no fitorevahana lehibe indrindra nanaovana bemidina. Rehefa nandeha ny fitifirana, dia ireo fiara mifono vy no naka ny toerana ary nisidina nanodidina ilay toerana ny angidimby.
Ny hopitaly sahan'ny fitsaboana izay ihazakazahana'ny olona hitondrana ireo vatana mitsitra hiala ny afo no nokinendrin'ny  tifitra variraraka. Niezaka nanao ireo famonjena farany ny mpitsabo.
Tsy tany aho, fa nahita kosa ilay lahatsary.  Hitako ireo sary izay voarakitra ato an-tsaiko tamin'ny fotoana nahitako azy ireo. Sarinà tranolay may, akanjo mihoson-drà, reny mitomany. Hitako ny tovovavy iray nigogogogo teo an-tratran'ny anadahiny, nanatri-maso ny fialàny aina.
Tsy tany aho, fa hitako ireo razana  nitandahatra tao anaty vatampaty fotsy, miandry ny fangalan'ny havany azy tao amin'ny Maoske-n'i Le Caire. Tahaka ny fasam-bahiny. Toy ny fasana iombonana taorianà ady izay norakofan'ny bolongana ranomandry ireo faty ary namendrahany fanalàna fofona mba hanaronana ireo fofona maimbo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/01/86655/
 fanaparitahana ny fitorevahana tao : https://en.wikipedia.org/wiki/August_2013_Rabaa_massacre
 Vonomoka tao Rabaa: https://www.hrw.org/news/2015/08/14/egypt-establish-international-inquiry-raba-massacre
 bala : http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/20/riot-police-arrest55studentsincairoclashes.html
 olona 1.000: https://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/08/14/counting-the-dead-of-egypts-tiananmen/
 vonoan'olona maro ataon'ny Herim-pamoretana any Ejipta. : http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/20138149485257839.html